IMM မှဘဏ္roာရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ Metro Credit Statement ကိုတုံ့ပြန်မှု! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IMM မှဘဏ္roာရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ Metro Credit Statement ကိုတုံ့ပြန်မှု!
15 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ
မြေအောက်ရထားနှင့်ဘဏ္ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏မြေအောက်ရထားချေးငွေရှင်းလင်းချက်ကိုဖြေဆိုပါ
အဆိုပါကြေညာချက်ကို Istanbul Metropolitan Municipality, ဘဏ္'ာရေးနှင့်ဘဏ္'ာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အတည်ပြုချက် ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင် Bul IMM စီမံကိန်းများအားသမ္မတ၏မဟာဗျူဟာနှင့်ဘတ်ဂျက်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှပြည်သူ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှဖယ်ရှားပစ်သော်လည်းဘဏ္uryာရေးသည်ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးပါ။ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီရရှိရန်အတွက်စီမံကိန်းကိုဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ ထို့နောက်ဘဏ္treာရေးအတည်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Sözcüsu Murat Ongun, ဘဏ္statementာရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
B ဘီဘီစီဥက္ကPresident္ဌ Ekrem loansmamoğluကချေးငွေများရရှိသော်လည်းဘဏ္Treာရေးခွင့်ပြုချက်မရရှိခြင်းကြောင့်သူတို့သည်စတင်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ Eminönü-Alibeyköyရထားလမ်း၊ Bostancı-Dudullu မက်ထရိုလိုင်းနှင့်Yenidoğan-ဆေးရုံလိုင်းတို့ကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ Imamoglu သည်သမ္မတအားမြေအောက်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးချေးငွေကိုစုဆောင်းရန်ဘဏ္Weာရေးခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ်စက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ငါတို့လိုချင်တဲ့ထိပဲ ..
ထို့နောက်ဘဏ္Treာရေးနှင့်ဘဏ္Ministryာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှရေးသားထားသောကြေညာချက်တွင် -
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏မြို့တော်ဝန် Mr. Ekrem amomamoğluကဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ချေးငွေကိုရယူဖို့ဘဏ္Treာရေးခွင့်ပြုချက်လိုတယ်။ လိုင်း ၃ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကိုဇန်နဝါရီလပထမအပတ်တွင်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာနသို့တင်ပြခြင်း (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာနမှပယ်ချခြင်းတို့အတွက်ချေးငွေခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုများကိုမတင်သွင်းခဲ့ပါ။
guaranteedsküdar-Altunizade-Ümraniye Dudullu Metro Line 126 Metro Vehicle ယာဉ်အမှတ်အသားနိုင်ငံခြားချေးငွေခွင့်ပြုချက်များဝယ်ယူရန်အတွက်စာနှင့်အတူ၊ Başakşehir-Kayaşehir Metro Line Construction, Electromechanical Works and Vehicle Procurement, Kaynarca၊ Kaynarca၊ -Tuzla မက်ထရိုလိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်နှင့်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်း၊ mekmeköy Sultanbeyli မက်ထရိုလိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်နှင့်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်း၊ Ümraniye-Ataşehir-Göztepeမက်ထရိုလိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်နှင့်ယာဉ်ဝယ်ယူရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတူ၊ -Esenyurt နှင့်ချယ်ရီ Halkalı Metro Lines စီမံကိန်းများအတွက် ၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာကိုပေးပြီးဖြစ်သည်။Sözcü)
- Murat Ong (@ mrt_ong ရဲ့) ဇန်နဝါရီလ 14, 2020
isaKB ချေးငွေဖြင့် Manisa - Uşak - Afyon မီးရထား EST စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ
သုံးထပ်ပါရှိသော Greater Istanbul ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအားဘဏ္uryာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှတင်ပြသည်
ပို့ဆောင်ရေးက Metro ဝန်ကြီးဌာနထံမှဝင်ငွေရှင်းလင်းချက်!
Turan ထံမှဝန်ကြီးများ Reply "Adana Metro န်ကြီးဌာနကိုသင်ခေါ်ဆိုခြင်းလွှဲပြောင်း"